Visa kuenda kuTurkey kweSaudi Arabia, gwaro pfupi - ALinks
Visa kuTurkey yeSaudi Arabia, pfupi pfupi gwara
April 11, 2021 alinks Saudis, Teki, vhiza
Iwe unogona kuwana vhiza yeTurkey pamhepo pa e-Visa Republic yeTurkey. Vagari veSaudi vanogona nyore kuwana vhiza yekugara pfupi muTurkey, yekushanya, kana yebhizinesi. Kana iwe uchida imwe rutsigiro kunyorera vhiza yeTurkey semugari weSaudi unogona kushandisa zvakare vhiza sevhisi senge iVisa or VisaHQ.
Kuti uwane vhiza yebasa kuTurkey, unofanirwa kunyorera pamwe neako ramangwana mushandirwi muTurkey. Iwe unogona kuzviita kune yako yemuno embassy yeTurkey kana muTurkey, verenga pano nezvekuwana mvumo yekushanda muTurkey. Kana iwe uchida kutsvaga basa muTurkey unogona kuverenga pano pamaitiro ekuwana basa muTurkey.
Kuti uwane vhiza yemudzidzi, hatina kunyora chinyorwa nezvazvo izvozvi, saka parizvino, tarisa izvi Chinyorwa chaStudee, zviri muChirungu saka shandisa Google Dudziro kana uchizvida. Asi zvakadaro, iwe unoda nzvimbo yekutanga kudzidza, saka tarisa pano nezvemamwe mayunivhesiti akanaka eTurkey.
Parizvino, Kubvumbi 2021, iwe uchiri kuda kutora bvunzo uye zadza chimiro ichi usati wasvika kuti upinde muTurkey, asi kune akagadziridzwa zvirambidzo zvekufamba kuenda kuTurkey chengetedza IATA Yekufamba Center uye bata ndege yako usati waenda.
Ungawana sei vhiza yeTurkey kubva kuSaudi Arabia?
Kana iwe uine Saudi Arabia passport, Unogona kuwana vhiza online panguva e-Visa webhusaiti yeRepublic yeTurkey Elektroniki Visa Kunyorera Sisitimu. Unogona kunyorera chero nguva kana zuva uye unofanirwa kuwana mhinduro mumaawa asingasviki makumi mana nemasere.
Visa yako yeTurkey ichave inoshanda kubva pazuva rako rekusvika kwenguva yakazara yemazuva zana nemakumi masere, asi haugone kugara munyika kwemazuva anopfuura makumi mapfumbamwe.
Iwe unowana vhiza yekupinda yakawanda, zvinoreva kuti iwe unogona kupinda nekubuda muTurkey nguva yakawanda sezvaunoda mukati memazuva zana nemakumi masere, chero bedzi usingagare mazuva anodarika makumi mapfumbamwe muTurkey.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uwane vhiza kuTurkey?
Asingasviki maawa makumi mana nemasere, ndizvo zvinokurudzirwa ne e-Visa yepamutemo webhusaiti. Kana iwe uchida kuiwana nekukurumidza iwe unogona kunyorera kuburikidza iVisa uye tora vhiza yako mumaawa asingasviki makumi maviri nemana, maawa mana, kana kunyange maminetsi makumi matatu.
Ungawana sei rubatsiro neako vhiza kunyorera?
Iwe unogona kunyorera vhiza yeTurkey iwe wega panguva e-Visa yepamutemo webhusaiti uko vane zvakare inowanzo bvunzwa mibvunzo (FAQ) peji muChirungu.
Asi kana iwe uchida vhiza yeTurkey mumaawa asingasviki makumi maviri nemana kana kana uchida rubatsiro rwekukurumidza iwe pachako neako vhiza kunyorera unogona kuenda kuburikidza neyakavimbika vhiza sevhisi, se iVisa.
Kumbira rumwe rubatsiro kune Saudis kuVisa
Ndekupi kwandinonyorera vhiza yeTurkey?
Visa Chikumbiro ehe ehe
Nyanzvi Zano vamwe pane peji rekubata ehe nemeseji, email, kana runhare
Kuongorora magwaro usati waendesa kwete ehe
Verenga zvimwe, Nyorera
Yakawanda sei vhiza yeTurkey yeSaudis?
60 US Dollars pamwe nemari yekubhadhara pamhepo, isingasviki madhora maviri zvakajairika zvichienderana nenzira yako yekubhadhara. Iyo e-Visa yepamutemo webhusaiti inogamuchira nzira dzakasiyana dzekubhadhara.
Vagari veSaudi vanogona kuwana vhiza pavanosvika muTurkey?
HERE, sekusimbiswa na iyo e-Visa Republic yeTurkey yepamutemo webhusaiti, saka unofanirwa kuwana vhiza zvisati zvaitika sezvingangodaro kunyange nendege yako isingakurege uri mundege usina vhiza.
Zvinhu izvo iwe zvaunoda kuziva usati watanga iyo e-Visa kunyorera pa e-Visa yepamutemo webhusaiti.
Pasipoti yako inofanirwa kunge ichishanda kwemamwe mwedzi mitanhatu kubva pazuva raunoda kuuya kuTurkey.
e-Visa inoshanda chete pakushanya uye zviitiko zvebhizinesi kana zvekutengeserana, kwete zvebasa kana kudzidza.
Nekudzvanya "Nyorera Izvozvi" pa e-Visa yepamutemo webhusaiti uye kusarudza ugari hwako unogona kuongorora kukodzera kwako e-Visa.
E-Visa yakasarudzika inofanirwa kutorwa kune mumwe mufambi, kusanganisira vana, Kunyange vana vachibatanidzwa mumapasipoti evabereki vavo.
Iwe unofanirwa kudzvanya bhatani 'bvumidza' uye enderera nekubhadhara mukati maawa makumi maviri nemaviri zvichitevera kugashirwa kwe 'e-mail address kutarisa' meseji. Kana zvisiri, uchafanirwa kuita chishandiso chitsva.
Munguva yekutengesa, kana mubhadharo ukamiswa uye ukatadza kuita, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, ndapota usaite chikumbiro chitsva kana kubhadhara.
Iyo e-Visa haina kudzoserwa.
Mari ye e-Visa iri muUSD chete., Kana Iwe usina maakaundi eDZD. Mari inoenderana inobviswa kubva kuaccount yako mune yako yemari mari.
Mushure mekubhadharwa, iwe unotumirwa e-mail nekubatana kurodha e-Visa yako. Paunopinda uye wobuda muTurkey, ndapota purinda kana chengeta yako e-visa email newe.
Ndokumbira utarise kuti iwe unofanirwa kufaira chikumbiro chitsva kana iwe uchida kupinda risati rasvika zuva rakatarwa.
Mushure mekuita kwacho, hapana ruzivo rwunogadziridzwa mushure mekunge e-Visa yagadziriswa. Iwe une basa rekuona kuti ruzivo rwako rwakanyatso kufanana nerako pasipoti ruzivo. E-Visa yako ingadai isingashande, uye hapana mari inodzoserwa.
Unogona kubata iyo e-Visa Batsira Desk kune rumwe ruzivo rwakawanda kuburikidza ne "Taura nesu"
Zvekubatana zvinongedzo zvakashandiswa mune zvirimo pamusoro senzira yekuti isu tibhadhare basa redu. Isu tichiri kugovana newe ruzivo rwechokwadi rwatinogona kuwana.
Mufananidzo wekuvhara pamusoro apa ndiTrolley muchando muSishane, Istanbul, İstanbul, Turkey, Mufananidzo na Randy Tarampi on Unsplash.
Ungawana sei basa muTurkey? Gwara rinokurumidza revatorwa uye vanhu veTurkey
Visa yeTurkey kubva kuQatar: kapfupi gwara
Ungawana sei mvumo yekushanda muTurkey? Chinongedzo chipfupi pane Turkish basa vhiza
Nyorera Bulgaria Visa
Nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira muTurkey
Itari yekushanya visa yevagari veIndia
Malaysia Visa yevaIndia
Tora Visa yeAfghanistan!
Dai 7, 2019
Unoda Kuvhura Akaundi Yebhangi muTurkey ?? Heano maitiro aungaita iwe nyore
Yakanakisa nguva yekushanyira Duba- Ziva Usati Waronga Rwendo Rwako!
Tikugashirei kuEurope, Gwara kumunhu wese
Zvitoro kuGerman Unofanirwa Kushanya
Yakanakisa Smart Bhendi muIndia ye2021
Dai 5, 2021
Yakanakisa Fitness Tracker Pasi pezana !!
Ungawana sei basa kuGerman? Nongedzo inokurumidza kune vatorwa uye vagari veGerman
Dai 2, 2021
Ungawana sei basa muQatar? Gwara rinokurumidza revatorwa neQatar
Dai 1, 2021
Nyika dzinobvumidza kupinda muSyria pasina vhiza
Yakanakisa Sayenzi Calculator yeVadzidzi!
Best Samsung Foni Inovhara
Idya mbeu idzi kuti uwedzere immune yako
Yakanakisa selfie tsvimbo ye iPhone India
Yakanakisa RO yekuchenesa mvura pasi pe10000 muIndia
Ndokumbira kuti usarudze iyo Tab Yenyaya mune Widget Zvirongwa.
Afuganisitani (9) rubatsiro (10) Ositireriya (17) Ositiriya (12) Kanadha (18) China (16) Korombiya (6) Dhenimaki (11) DR Congo (7) Furanzi (16) Jerimani (16) tenderera (27) utano (29) Hong Kong (11) Hotels (28) dzimba (15) India (71) Iraki (13) Itari (22) mabasa (40) Marazhiya (12) Mekisiko (22) mari (27) Naijeriya (12) Noweyi (12) Pakisitani (12) vapoteri (36) Rashiya (14) Saudhi Arabhiya (9) chikoro (20) Speini (16) kudzidza (33) Siwizarendi (7) Tairendi (13) zvinhu zvekuita (46) famba (129) Teki (24) Brazil (13) Uganda (9) UK (53) USA (30) zvinoshanda zvinobatsira (21) zvinhu zvinobatsira (86) Venezuela (12) vhiza (72)
Asylum Links fb peji
Europe ALinks fb peji
Americas ALinks fb peji
West Asia neNorth Africa ALinks fb peji
India ALinks fb peji
West Africa ALInks fb peji
Maodzanyemba neCentral Asia ALinks fb peji
Kumabvazuva, Pakati neChamhembe kweAfrica ALinks fb peji
East Asia uye Southeast Asia ALinks fb peji